Mgbatị ahụ dị nkeji iri ọ dị irè? - Mmega
Isi > Mmega > Mgbatị dị mkpụmkpụ - ihe ngwọta dị irè
Mgbatị dị mkpụmkpụ - ihe ngwọta dị irè
Mgbatị ahụ dị nkeji iri ọ dị irè?
Site na mmega ahụNkeji 10site n'ike na mgbalị, ị ga - enwe ike inye ahụ gị ihe ọ chọrọ iji na - eme mgbanwe, na - arụ ọrụ ahụ, ma na - amụba ikike gị. IriNkejiotu ụbọchị zuru iji nye gị nnukwu iherụpụta.Eprel 4 2021
Hey ụmụ okorobịa, ọ bụ Robin si Balancelife na m chọrọ ịza ajụjụ ngwa ngwa m na-enweta. Ọ bụrụ na ị maara m, ị maara na m hụrụ n'anya na-agba ọsọ ihe ịma aka na-eke mmemme na-agụnye obere kwa ụbọchị Pilates mgbatị, otú ahụ ka m nwere ihe ịma aka a na-akpọ 28 Days Pilates a afọ ole na ole gara aga na m nwere a njuaka nsogbu kemgbe ahụ niile na-elekwasị anya naanị ime 10 nkeji nke Pilates a ụbọchị na otu n'ime ajụjụ m na-enweta ọtụtụ bụ na 10 nkeji mgbatị n'ezie na-arụ ọrụ na m kpam kpam na-enweta ya, ọ bụ oké ajụjụ n'ihi na ọ bụrụ na ị na-eme Ama gwara m afọ ole na ole gara aga, m gaara na-enwe obi abụọ kwa, ọ na-ada ụda nke ọma ịbụ eziokwu na otu ma ọ na-emegide ihe niile m maara banyere calorie na-ere ọkụ ma ị maara na ị gụọ ihe niile na-ekwu ma ọ bụrụ na ị rie ụlọ mmanya Snickers ị ga-emega ahụ ruo awa atọ ma ọ bụ ihe ọ bụla bụ ịkụcha calorie ndị ahụ ka m wee nwee obi abụọ. Amaara m na m na-eme mmemme a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ ise ma hụ nsonaazụ dị ịtụnanya sitere n'aka ndị mmadụ n'ụwa niile, yabụ na nkenke, azịza ya bụ ee bụ ọrụ nkeji 10, mgbatị nkeji 10, mana achọrọ m ịgafe ihe kpatara ha ji arụ ọrụ maka ndị nke ị ka nwere obere obi abụọ, yabụ enwere m ndetu m na m ga-agabiga ha ma nwee olile anya ime ka ị kwenye na enwere ụzọ dị mma ma dị ụtọ iji tinye mgbatị na ndụ gị kwa ụbọchị. iwekota.
Ihe mbu bu na oburu na ichoro ime ihe dika nkeji iri kwa ubochi ma mara na ikwesiri ime ya, o bu nani nkeji iri, o na ebu nsogbu echiche gi mgbe imara na mgbatị a na-abia ma mara otu odi, ima gi nwere ime nke a mgbatị ahụ ka ị na-eche banyere ya ụbọchị niile ma ọ bụrụ na ị na-niile na-arụsi ọrụ ike ma ọ bụ ọ bụrụ na ihe na-agbanwe atụmatụ ma ọ bụ na ị maara mgbe ị nwere ụmụaka dị ka m na otu onye n'ime ha na-eteta ụra n'oge Ọ bụrụ na ị ga-ehi ụra ma ọ bụ rie na inopportune oge, mgbe ahụ ọ emebiwo n'ihi na elekere ị na-ewepụta maka onwe gị emebiela .Ọ nwere ike ịhapụ ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị nkeji iri ka ị nwere ya Achọghị m ịma etu ị si arụ ọrụ m achọghị m ịma ihe ga-eme Baby na-ehi ụra n’oge, mmadụ chọrọ mgbanwe metụ akwa, ị si n’ụlọ ọrụ na-alọta n’abalị, ihe ọ bụla ọ bụ, ị nwere ike ịchọta oge 10 ma ị ga-efunahụ echiche B, ma ọ bụrụ na ọ bụ obere mgbatị, yabụ ka anyị mee ihe n’eziokwu mgbe ụfọdụ, anyị anaghị Ọ na-adị m ka m na-eme mgbatị ahụ ogologo oge na onye ọ bụla nwere ike ịsị na ọ dị mma, enwere m ike ịme 10 nkeji maka nkeji 10, nke ahụ bụ isi ihe kpatara arụ ọrụ mgbatị elekere 10 na mgbe ahụ nke ahụ na-eduga m na isi okwu m, nke mbụ bụ na ọ ga-eme ka ị gabiga ihe mgbochi uche na nke abụọ, ọ na-enweta gị na ute gị na ihe m chọtara n'ọtụtụ ndị gbalịa atụmatụ a bụ Ọ bụrụ na imere nkeji iri ma obi adị gị mma, ị nọla n’elu ala, ị nọlarị ute gị ka ị nwee ike ịchọta onwe gị oh m nwere ike ime nke ahụ, enwere m ike ịme nkeji 10 ọzọ wee sị na ị na-eme Ihe ọzọ dị mkpirikpi YouTube ma ọ bụ 10 ọzọ Nkeji nke mmega ahụ kachasị amasị gị s na tupu ịmara ya, ị meela 20 nkeji na eleghi anya 30 nkeji na ihe nzuzo dị n'azụ ya, na-emeri nsogbu uche, na-abanye n'ute gị. bido na mgbe ị hụrụ ọ dị mma maka na mmega ahụ na-adị mma mgbe niile ọ bụ ihe na-akpali akpali ka ị na-aga. Isi nke abụọ bụ na obere ihe na-edugakarị na ikike karịa n'ihi na akụkụ kachasị sie ike na-amalitekarị na ịmara na naanị ihe ị ga-eme bụ rụọ ọrụ maka nkeji 10, mana ozugbo ị malitere ịmalite inwe mmetụta ahụ, ọ ga-erikwa ya ahụ.
Isi okwu nke atọ na-akpali akpali na nyocha ọzọ na-egosi na mgbatị dị mkpụmkpụ na-arụ ọrụ nke ọma karịa na ha anaghị arụ ọrụ karịa ogologo oge na enwere ọtụtụ ihe kpatara ya mgbe ọ na-arụ ọrụ mgbatị ahụ otu ma ọ bụ karịa mgbatị ahụ dị ogologo na otu a maka Pilates, mana enwere m ụzọ pụrụ iche iji mee ka ị lekwasị anya n'ụdị gị na obere mgbatị na-anọ ma nwee ike ịme nkeji 10 ahụ nke ọma kama ịnwa ime otu awa ma ike gwụrụ ma gwụ ịkwụsịtụ na ịda adịrị n'ihi na ị ga-ejedebe ụdị igbu oge, m ga-ekwu na A 60 nkeji pilates mgbatị ahụ dị njọ, ọ bụrụ na ị nwere ike ime ya, ị nwere ike ịga klaasị wee nwee ezigbo mgbatị na ya, nke a bụ ọ dị mma mana nke bụ eziokwu bụ ọtụtụ n'ime anyị juggle nke a n'ụlọ ka nkeji 10 wee lekwasị anya n'ụdị gị na-enye ya ihe niile gị tupu ike gwụ gị ma na sloppy na ọ bụ eziokwu na-atọ ụtọ na obere mgbatị ndị a na-enyere aka ịhazi usoro mgbatị gị nke cardio na-eme m ọsụsọ na iyuzucha Ed na mgbe ahụ agụụ na-agụ m n'ezie, echere m na m kwesịrị ihe ọ bụla ọ bụ nnukwu nri ma ọ bụ ihe eji megharịa ọnụ ma ọ bụ ihe ọ bụla mana nke bụ eziokwu bụ na agụụ na-agụ m site na ịpị m metabolism, ọ bụrụ na ị na-eme obere oge 10 nkeji oge ọ na - enyere gị aka imezi agụụ gị , Ọkụ Obi m na-abawanye ma m na-eku ume nke ọma Ọ na-adị m ka m siri ike m maara akwara m mana ọ gaghị akpọrọ gị na kichin kama ọ ga-akpọrọ gị gaa ebe m chọrọ ịsọpụrụ ọrụ a anaghị amasị m ọ bụ na enwere m mmetụta dị mma n'ụzọ dị otú a ma ama m na m na-arụ ọrụ ahụ ike ahụ, enwere m ike ịnụ ya na m na-enweghị ihe ọ bụla ka m wee nwee ike ịga kichin ma nọrọ naanị ebe ahụ ma rie nri. Emere m naanị n'ihi na ị na-eche nke ọma ma na-anụ ahụ gị na m maara ahụ gị, yabụ na ụsụ, ihe ndị a bụ ihe anọ m chere na obere mgbatị na-arụ ọrụ, ma mara n'ezie, na ụsụ m chere ọ bụ ha. Ahụla m ụmụ nwoke a n'ụzọ nkịtị na ọtụtụ narị ụmụ nwanyị ọ bụ ụbọchị abụọ n'izu na ụbọchị ndị ọzọ niile bụ obere mgbatị na ị maara ihe kpatara ebum n'uche m na The Sisterhood na mmemme m niile bụ inyere gị aka ịnọgidesi ike n'ihi na Nnukwu ọgụ niile bụ ịnọ mgbe niile Anyị na-enwe mkpali Anyị nwere obi ụtọ Anyị na-anwale ihe ọhụrụ site na mmemme ọhụrụ mana n'ime izu ole na ole anyị ga-agwụ ike ma ọ bụ na anyị na-arụsi ọrụ ike na ọ siri ike ịbanye na nnukwu nkwa ndị a ka ihe niile wee kwuo na 10 mgbatị oge na-arụ ọrụ, n'ihi na ị nwere ike ịnọgidesi ike, ị nwere ike imeri nsogbu echiche ahụ ma ị ga-abanye n'ute gị, ị nwere ike imeghari n'agbanyeghị agbanyeghị ọrụ ị na-arụ na ị nwere ike iri uru na ịnụ ụtọ uru nke mmega ahụ ejikọrọ na ahụ gị zuru ike ka ị nwee ike b Mee mkpebi ndị ọzọ, ihe a niile na - emekwa ka gị na - agbanwe agbanwe, yabụ ọ ka mma ịdị na-agbanwe agbanwe ogologo oge karịa iji otu ọnwa na-eme ezigbo mmega ahụ gị wee were ọnwa anọ. ọnwa isii kwụsịrị ihe ọ bụla ọ bụ wee malite ọzọ ma gbalịsie ike wee wepu ọnwa atọ ọzọ gị niile maara usoro a, ọ bụghị naanị m maara usoro a wee jiri nkeji iri rụọ ọrụ ọzụzụ m kwuru kpọmkwem nkeji iri nke mgbatị na otu nke isi ihe kpatara nke ahụ bụ n'ihi na ọ na-enyere gị aka ịnọgide na-agbanwe agbanwe, yabụ ọ bụrụ na ị nwere ahụmịhe na-arụ ọrụ nkeji iri. Ọ ga-amasị m ịmegharị na ịkọrọ m ya. Achọrọ m ka ị soro m na mgbasa ozi mmekọrịta wee debanye aha maka akwụkwọ akụkọ m n'ihi na m ga-ewepụta ihe na-atọ ụtọ na Fraịde a nke ga-ewukwasị na nke ahụ.
Ebumnuche m bụ inyere gị aka itinye ya n'ọrụ ma hụ otu o si arụ ọrụ nye gị yabụ hapụ okwu ma denye aha na akwụkwọ akụkọ m, anyị ga-ahụ gị n'oge na-adịghị anya
ego ole bụ igwe kwụ otu ebe
Mgbatị ahụ nke oge 7 ọ na-arụ ọrụ n'ezie?
HICT na-adịkarị nchebe, dị irè, ma na-arụ ọrụ nke ọma, na-enye nhọrọ mmega ahụ dị mma maka ndị na-echebara oge. Ọzọkwa, n'ihi na a na-eji ibu ahụ eme ihe maka iguzogide, ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ikemeendiaomumeoge obula, ebe obula, n’enweghi ike inweta ngwa oru na ulo oru puru iche.June 6. 2013 g.
(Oti mkpu na-apụ) - Kedu ihe bụ ụmụ okorobịa? Ọ bụ Chris Heria, nabata na vlog ọzọ. Anyị na-amalite amalite ụtụtụ. Dị ka onye ọ bụla ọzọ, ozugbo ị tetara, ị na-eme ntakịrị nke kadio, ụfọdụ ụdị ọrụ ụtụtụ, ikekwe ị na-agba ọsọ na igwe ịgba ọsọ.
Anyị ga-amalite ụbọchị anyị site n’ịrụ ọrụ ụtụtụ nke ị nwere ike ime kwa ụbọchị nke emebere iji mee ka abụba na abụba dị ike. Omume ndị a niile maka usoro a bụ nrụgide dị ala, nke pụtara na ị nwere ike ibili ma teta ma nwee ike ịbanye n'ime ha ozugbo. Ihe kachasị mma bụ na mmega ahụ dị oke irè, mana mmega ahụ onye ọ bụla ma ọ bụ novice nwere ike ịmalite ozugbo.
Youchọghị ahụmịhe ahụike tupu ịmega mmemme ndị a. Nke pụtara na ị nwere ike ịmalite ịme ụtụtụ na m ugbu a. N'ime usoro ahụ, anyị na - arụ ọrụ dị iche iche dị na ahụ anyị, mana anyị agaghị agabiga akwara ọ bụla, yabụ, ọ dị mma ịme usoro a kwa ụbọchị. ị ga - eme ka mọzụlụ gị na - akpali akpali karịa karịa ịpịa naanị otu otu akwara ukwu kwa ụbọchị.
O yikarịrị ka ị ga-ahụ otu akwara a otu ugboro n'izu. Nke ahụ ga - eme ka ị hụ na ị na - arụ ọrụ ma na - emepe akwara gị oge niile n’izu. Otu n'ime ihe kachasị mma banyere ya, ihe mbụ n'ụtụtụ, bụ na ị ga-anọgide na -emepụta mmetụta mgbe ị gachara ọkụ, nke ga-eme ụbọchị ezumike, ọbụlagodi awa 24 na-ere ọkụ n’ọkụ ruo ogologo oge.
N’ihi ya, achọrọ m ka ị na-eme ihe a kwa ụtụtụ. Ọ gaghị esiri gị ike ma ana m ekwe gị nkwa na ị ga-esure abụba mgbe niile, wulite ahụ gị, ma banye n'ụdị kacha mma nke ndụ gị. Ka anyị gbadata bido bido ka anyị bido.
Mepee ngwa HeriaPro maka usoro ụtụtụ a ma ka anyị bido mgbatị ahụ ozugbo. Maka mmega ọ bụla anyị ga-eme sekọnd 45 ma anyị ga - ewere ezumike nke 15 n'etiti mo ọ bụla a maara nke a dị ka nnukwu ọzụzụ ọzụzụ oge, nke a ga - enye gị nsonaazụ nke ga - eme ka ị na - enwu ọkụ ruo 24 awa mgbe ị mechara usoro mgbatị ahụ a. Ya mere mmega ahụ izizi bụ ọkara burpe, mara etu esi eme mmega a, gaa n'ihu, pịa mmegharị ahụ, lee edemede ahụ. (egwu egwu dị jụụ) Ọ dị mma, yabụ ka anyị bido, sekọnd 45.
Anyị na-eme ihe ntinye aka, ma e wezụga ụkwụ anyị. (ụda elektrọnik dị nro) ♪ Egwu Heria ♪ (na-agba ume n'ike) Ọ dị mma, yabụ lee anyị nwere mmega ahụ izizi. Nke a bụ maka ịbanye n'ọnọdụ nkwụ na ịrịgo n'ụkwụ gị.
Ekwesighi ịbụ ihe mgbawa dịka m ga - eme ya n'ike gị ma ị ga - emecha ka mma. Ihe mgbatị ahụ na-esote bụ ịkụnye mkpịsị ụkwụ gị n'elu osisi ọzọ. Ka anyi bido. (egwu elektrọn dị jụụ) Jide isi gị nke ọma ijide n'aka na ị na-achịkwa iku ume gị.
Ọ bụrụ na ị na-eku ume ọsọ ọsọ, ị ga-agba onwe gị ọsọ. Mee ka ụkwụ gị kwụrụ ọtọ, aga m nna nna pịa gị otu akụkụ n'èzí, bata, pịa n'akụkụ nke ọzọ. Jide n'aka na ị ga-eme nkwekọrịta ubu gị ma tuo isi gị.
Kwaa ahụ́ gị dum. (exhales sharply) Ọ dị mma, yabụ mmega ahụ dị ka izu ike na-arụ ọrụ, ya bụ, ozugbo ị mechara mmega ahụ siri ike dịka ọkara burpe, ịchọrọ ịnọgide na-ejide obi gị, ọsụsọ, abụba na-ere ọkụ, na-akpali akpali ma na-eto eto ahụ gị ikwe ka. Ya mere, ka ibugharịa na na nke ọzọ mmega maka n'akụkụ plank jide. (Ezigbo Eletrọniki Egwu) Maka mmega ahụ a, ọ dị ezigbo mkpa na ị ga - eme nkwekọrịta gị, ọkachasị ihe ọ bụla ị ga - eme, ma kpochapụkwa ubu gị, na - anwa ibuli ahụ gị ma tinye isi gị otu o kwere mee.
Ya mere afanyekwa, piputa na iku ume oge niile. Ọ dị mma, anyị ga-aga n'ihu ma gbanwee. Music Heria egwu ya (na-agba oke) Ọ dị mma.
Ka anyị gaa n'ihu. Anyị ga-agagharị na mmega ahụ na-esote, nke ahụ ga-abụ plank dị elu gaa elu plank nke na-aga n'ihu na-arụ ọrụ anyị. Ma iji kpalie ahụ anyị dum ma kpalie ogwe aka anyị.
Ka anyị bido ihe omume a ozugbo. 45 sekọnd. (Quiet electronic music) Ọ dị mkpa ka ị na-eme mmega ahụ iji nweta ahụ erughị ala na ụdị na usoro gị isi You achọghị ịgagharị dị ka nke a mgbe ị na-eme njem a.
Gbalịa idobe ụdị gị dịka o kwere mee. Mgbe ị gafere ọkara, ị ga-achọ ịgbanwe aka ị ga - amalite. Ya mere mee ole na ole ndị ọzọ Ọ dị mma, ka anyị bulite ya. Music Egwu Heria ♪ Ọ dị mma. (Exhales sharply) Ihe ọzọ anyị ga-eme bụ ịkụ aka.
Nke a bụ nnukwu ihe ị ga - eme iji nweghachi ike ugbu a. Anyị ga-ezumike na ogwe aka anyị nke pụtara na anyị ga-enwe ike karịa n'ụkwụ anyị, anyị ga-enwe ike ịnọgide na-arụsi ọrụ ike ma nwee ọganihu nso. Ọ dị mma, ka anyị gbupụ bọtịnụ ndị ahụ ozugbo. (egwu elektrọniki dị nro) ♪ Egwu Heria ♪ Cheta idozi iku ume gị.
Ikuku ume nwayọ, kuru ume nwayị. Nke bụ eziokwu bụ na iku ume bụ ihe niile. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịmụta ịhazi iku ume gị na iku ume nke ọma mgbe ị na-emega ahụ, ị ​​ga-eme ka ntachi obi gị dịkwuo oke na usoro a.
Anyị na-aga anyị na-agagharị na ikpere ikpere. 45 sekọnd n'ihu. Ya mere, anyị si n'azụ gbapụ, ugbu a, anyị ga-ebuli n'ihu ma bulie agbụ ígwè na ihu na azụ.
Ka anyị mafee n’ime ikpere ikpere ndị ahụ dị elu. (egwu elektrọniki dị nro) music Egwu Heria ♪ gbue ikpere gị niile. Ka ị na - eburu ya, ka ị na - etinyekwu onwe gị, ka ị na - eme njem a.
Ise ọzọ. (exhales sharply) Ọ dị mma, anyị 'Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọsụsọ na-agba m. Nke a bụ naanị agba nke mbụ.
Na nke ahụ kwuru, gaa n'ihu, wepụ ọkpọ ikpere dị elu na ndepụta ahụ, anyị na-aga mmega ikpeazụ. Nke ahụ ga-agbago squats, 45 sekọnd. Anyị agaba. (A na-ekpochapụ ume) (egwu elektrọn dị nro) ♪ Egwu Heria ♪ Nọgidenụ, ihe niile i nwere.
Jide n'aka na ị bụ isi gị ma debe ya dị ka ihe mgbawa ka ị nwere ike mezue otu, ka anyị gaa ma lelee squats si ọzụzụ, nke a bụ ebe ị ga-enwe usoro ụtụtụ zuru oke maka ogo ahụike niile. Bido ozugbo, ma cheta, naanị ịme otu ụkwụ ya dị irè karịa oge 30 nke na-agba ọsọ na igwe ịgba ọsọ, ọ bara uru karịa n'ihi na ị na-ejikwa ogwe aka gị na akwara ndị ọzọ na ahụ gị, ọ bụghị naanị cardio Nke a mmemme zuru oke maka oge mbụ n'ụtụtụ. Ọ na-ewe naanị nkeji asaa iji mezue mmemme ahụ dum.
Naanị ihe omume asaa, sekọnd 45 na, 15 sekọnd apụ, na mmemme ndị a niile bụ isi, mmega mmetụta dị ala nke ị na-eme Youchọghị ihe ọmụma ahụike ọ bụla ma ọ bụ ahụmịhe mbụ ma ị ga-enweta mgbatị dị ịtụnanya. You ga-egbubiga abụba ahụ n'onwe gị kwa ụtụtụ wee wuo ahụ ike mgbe niile. N'ikpeazụ, ị ga-enweta ọtụtụ ihe ka mma karịa nke ahụ.
Omume a na - adịwanye mfe, ị ga - enwe ike ịme agba abụọ wee mechaa agba atọ, nke ahụ ga - ewe ihe dị ka minit 25 ruo 30 ka ị wee nwee mgbatị ahụ dị oke mma. Ma ọ bụrụ na ịnweghị minit 30 n'ụtụtụ, naanị teta 30 nkeji tupu mgbe ahụ. Eziokwu bụ na anyị anaghị enwe oge oge niile, ị ga-ewepụta oge ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmezu ebumnuche gị.
Daalụ maka isonyere, ị dịla njikere ịmalite ụbọchị ahụ, m ga-ahụkwa gị ọzọ n'ụtụtụ echi iji laghachite na usoro a, ma cheta, ọ bụrụ na ị na-achọ ịhụ ezigbo nsonaazụ, ị ga-azụ smart na na ị Ikwesiri inwe usoro mmega ahụ nke ọma iji hụ na ị na-abanye n'ụdị kachasị mma nke ndụ gị dị ka o kwere mee. Ọ bụrụ na ịchọrọ ọzụzụ nke onwe m na mmemme ọzụzụ nke m na-eziga kwa ụbọchị na kwa izu, mgbe ahụ, budata usoro ihe omume HeriaPro na ekwentị gị ka m na-etinye ha n'oge. Ọ dị ka ịnwe onwe m n'akpa gị dịka onye na-azụ onwe gị.
Not bụghị naanị ịnweta mmega ahụ m niile na mmemme m, kamakwa mgbatị niile m meere ndị ọzọ n'oge gara aga, yana mgbatị mgbatị nke m mepụtara nke na -emepụta mmemme ọzụzụ maka gị na ogo ahụike gị, na-elebara ahụike gị anya. Naanị tinye otu akwara ị chọrọ ịrụ ọrụ, oge ole ị ga-eme, mmega ahụ ike gị, ụdị akụrụngwa ịchọrọ iji rụọ ọrụ, yana ma ịchọrọ ikpo ọkụ ma ọ bụ na ị gaghị achọ ozugbo. ihe omume maka imepụta, ụdị Chris Heria. Yabụ, m ga-ahụ ụnụ ụmụ nwanyị na ngwa HeriaPro.
Daalụ maka ilere edemede a. Ma ọ bụrụ na ị masịrị isiokwu a, pịa otu bọtịnụ dị ka. Ikwu n'okpuru, mee ka m mara ihe edemede na-esote maka maka na m gụrụ azịza niile.
Ma maa soro enyi gị kerịta isiokwu a, na-anwa ịwulite ahụ ike na ịba abụba na ịhazi usoro ụtụtụ ya. Maka otutu ihe m na-eme n'ime izu, gbaa mbọ hụ na ị ga-eso m na Instagram. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkwa ọ bụla, ana m enye ụfọdụ ụdị inyefe.
2016 mongoose anyịnya igwe
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ohere ịbụ akụkụ ya, soro m na Nke a bụ Chris Heria ka a nụrụ na ọwa a, yana ụfọdụ egwu ị nụbeghi. Na njedebe ma ọ dịghị ihe ọzọ, mụ na ndị ọrụ ahụ ga-anọ na Rome, Berlin na Barcelona na ngwụcha Ọgọstụ ma biputere mmemme mgbatị nke anyị ma chọọ ịnọ ebe ahụ, debanye aha ugbu a na thenx.com/blog/events.
Ihe omume na-abịa n’oge adịghị anya ma a na-edebe ebe ndị ahụ ngwa ngwa. Ya mere doputa ebe gi ugbua. Njikọ ahụ dị na ala nke nkọwa ahụ.
Leekwa na ngwụcha ọnwa Ọgọst. Maka onye ọ bụla, hụ gị Tọzdee ọzọ ma ọ bụ Sọnde na-esote na Channel Channel. Crazy love, udo nwa
Ime obere ọrụ na-eme ihe ọ bụla?
Otu ihe ọmụmụ si Mahadum Utah na-egosi na ndị niile obere ibe n'ibe na iberibemmega ahụgịmeeKwa ụbọchị nwere ike itinye ihe buru ibu. Nnyocha ọzọ e bipụtara na Obesity gosipụtara na nkewammega ahụgbagoomkpụmkpụchunks na-eme ụfọdụ uche ma a bịa na njikwa agụụ.27bọchị 27 2017
Maka nke ọma ma ọ bụ nke kachasị njọ, ịntanetị na-akpọkọta ndị mmadụ site n'akụkụ dị anya nke ụwa ma na-enye ozi na isiokwu ọ bụla a pụrụ ichetụ n'echiche. Na n'ezie porn kwa. E nwere ụfọdụ arụmụka banyere ole ịntanetị bụ n'ezie ihe na-akpali agụụ mmekọahụ.
Ma ọ bụrụ na ị chọọ ya, ị ga-achọta ya. Kedu ka o si emetụta echiche ndị mmadụ, omume na omume ha? Azịza ya bụ: Ọ gbagwojuru anya ma anyị amaghị ọtụtụ. Ma anyị enyochaala ụfọdụ ihe egwu - ee ee, ọbụlagodi uru dị na ya - nke ikiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ.
Know mara, ụfọdụ n'ime ọmụmụ ihe ndị a na-ekwu maka omume na-akpaghasị agwa mmadụ dịka ime ihe ike na ndina n'ike. Naanị ma ọ bụrụ na ịchọrọ izere ihe ndị a. Imirikiti nnyocha ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-emetụta - ọ dịghị ndị ọrụ afọ ofufo a na-ekenyeghị onwe ha ile usoro isiokwu doro anya iji hụ ihe na-eme n'uche ha.
Kama nke ahụ, ọtụtụ ọmụmụ gụnyere nyocha na-ajụ ndị mmadụ banyere omume na omume ha, na mgbakwunye na ole porn ha na-ekiri, onye ọ bụla nke na-ekere òkè ga-ekwenye isonye na ọmụmụ ihe na-akpali agụụ mmekọahụ, nke nwere ike ịpụta na ụfọdụ ndị na-eche na ha họọrọ onwe gị. Ihe ndị a niile ị ga-ekwu, anyị enweghị ike ijide n'aka ma nsonaazụ ndị a metụtara mmadụ niile ma ọ bụ ọbụlagodi ọtụtụ mmadụ, mana ha bụ mmalite. Fọdụ nnyocha achọpụtala na ikiri ọtụtụ ihe na-akpali agụụ mmekọahụ nwere ike igosi ọdịiche dị na ụbụrụ ndị mmadụ, ọkachasị n'akụkụ akpọrọ striatum.
The striatum na-etinye aka na nhazi ụgwọ ọrụ ma na-arụ ọrụ mgbe niile n'oge agụụ mmekọahụ - n'etiti ihe ndị ọzọ na mpaghara ndị ọzọ bụ ọzụzụ maka akụkụ buru ibu nke ụbụrụ gị. Nnyocha MRI abụọ nwalere ihe gbasara ndị nwoke 70 na-egosi ha foto sexy. Themụ nwoke ndị hụrụ ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ha na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe ma ọ bụ nwee nsogbu nwere ọrụ mgbochi karịa ndị na-emeghị.
Nnyocha ọzọ chọpụtara na ọnụ ọgụgụ nke egwu elere anya na akụkụ nke striatum, Ọkpụkpụ aka nri, yana njikọta n'etiti striatum na akụkụ ndị ọzọ nke ụbụrụ, ndị na-eme nchọpụta na nchọpụta ọhụrụ a na-ekwu na ọ ga-ekwe omume na ndị na-ekiri ọtụtụ ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ga-akpali usoro nkwụghachi ụgwọ a nke ọma ma gbanwee uche ha n'ezie iji chọọ mkpali. Ma ha na-ekwukwa na ụbụrụ ụbụrụ nwere ike ọ bụghị kpatara okwu egwu, ndị nwere obere striatum nwere ike ịchọ mkpali ọzọ iji nweta obi ụtọ ma chọọ foto ndị gba ọtọ ọzọ. Site na ụdị nyocha nke mmekọrịta a, ị gaghị amata onye n’ime ha abụọ.
Ajụjụ ọzọ na-ebukarị bụ ma ikiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ nwere ike ọ bụ ajọ ihe - ọ bụ ụzọ dị mma maka mmetụta ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ anwaala ịmụ otú o si emetụta iwe. Ọ bụrụ na ị lelee ụkpụrụ izugbe dị na US, ịnweta ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ adịla mfe n'afọ ndị na-adịbeghị anya.
Ruo ọtụtụ iri afọ, ọnụ ọgụgụ nke mpụ ime ihe ike dị ka idina mmadụ n'ike belatara. E nwekwara usoro yiri nke a mgbe ị na-ele mgbe ihe gba ọtọ na-agbasakwa na mba ndị ọzọ, nke bụ naanị mmekọrịta yana ọ bụghị ọmụmụ niile na-egosi njikọ a. Dịka ọmụmaatụ, 2016 meta-analysis na Journal of Communication nyochaa nyocha dị iche iche 22 na-ajụ ndị mmadụ banyere ahụmị egwu ha na-akpali agụụ mmekọahụ na mkparị mmekọahụ na-akọ banyere onwe ha - ihe dịka iji ime ihe ike, mkparị okwu, ma ọ bụ omume egwu ndị ọzọ.
Ha chọpụtakwara na ọtụtụ porn nwere njikọ na ọkwa dị elu na ịkpa ike mmekọahụ, ọkachasị mgbe porn nwere ime ihe ike. Nke a na-egosi na ịme ihe omume nwere ike ịdị na-arụ ọrụ: na ndị mmadụ na-ahụ omume na ndị ọzọ - ọbụlagodi na ihuenyo - nwere ike ime ya n'onwe ha. Ya mere ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ gbalịrị ịghọta nke a megidere data.
Ihe omumu nke 2012 nke edeputara na Journal of Criminal Justice nwere ike inyere aka itughari: nmekorita di n'etiti egwu na mmegide nwere ike inwe oge. Ndị nnyocha ahụ jụrụ ihe karịrị narị mmadụ isii toro eto ikpe ikpe mpụ gbasara akụkọ gbasara ikiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. Ha chọpụtara na ikiri foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ mgbe ọ na-etolite etolite na mpụ ndị ka njọ nke emere dị ka ndị okenye, gụnyere mmechuihu nke ndị ha metụtara, yabụ ịmalite ịkwa iko n'oge ike nwere ike iso na-arụ ọrụ.
Ma ọ bụrụ na ndị ahụ mara ikpe kọọrọ na-ekiri egwu obere oge tupu mpụ ha, mpụ ha adịchaghị njọ, yabụ enwere ike itinye aka na catharsis. Ma enwekwara ọtụtụ ihe na-eduga na mpụ ime ihe ike. Ndị na-amụ ihe ndị dị ka nke a pere ezigbo mpe n'ihi na ọtụtụ ndị anaghị eme mpụ ihe ike.
Ihe dika mmekorita nwoke na nwanyi di nfe karie n'ihi na onye obula mara agwa ha banyere nwoke na nwanyi. Na nke ahụ oge niile. Ọ bụ ịntanetị.
Dị ka ọmụmụ abụọ e bipụtara na Journal of Sex Research na 2015 na 2017 nke nyochara àgwà nke iri puku kwuru iri puku ndị America, ejikọtara iji egwu egwu na echiche ndị ọzọ - ihe dịka ọchịchọ ụmụ nwanyị nọ n'ebe ọrụ na ọnọdụ mana akụkọ dị iche ma a bịa n'ihe gbasara ndina n'ike n'ike, dị ka echiche na ihe mmadụ na-eyi nwere ike ịgọpụ ime ihe ike megide ha. Nnyocha nke ọtụtụ narị ụmụ akwụkwọ kọleji achọpụtala na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-ele egwu porn - ọkachasị ime ihe ike - nwere ike ikwere akụkọ ifo. N'ikpeazụ, a bịa n'ọdịmma gị n'ozuzu, ọtụtụ ọmụmụ na-egosi na ma porn dị mma ma ọ bụ dị njọ maka gị dabere ma ị chere na ọ bụ.
Nnyocha nke ihe karịrị mmadụ 2,000 chọpụtara na metụtara ikiri ihe nkiri na mmụba nke mgbaàmà akuko nke ịda mba. Agbanyeghị, a hụrụ nke a na 10% ndị lere anya n'agbanyeghị nkwenye omume ha. Ndị ọrụ nyocha ahụ chere na ọnọdụ a nyere ndị mmadụ nsogbu enweghị nghọta n'etiti ụkpụrụ omume ọma ha na omume ha.
Maka ndị na-enweghị omume rụrụ arụ, naanị ndị na-ekiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ ọtụtụ ugboro n'izu ma ọ bụ karịa kọọrọ ọtụtụ ihe mgbaàmà nke ịda mbà n'obi. Ndị nchọpụta ahụ chere na nke a nwere ike ime ebe a: ndị a nwere ike ịda mba ma jiri porn mee ya. N’ihi ya, o yiri ka ọtụtụ ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ dị n’ile ya, ma o nwere ike ọ gaghị adị njọ.
Karịa ihe ọ bụla, anyị chọrọ nyocha ọzọ iji mata n'ezie ma otu esi eme? N'ihi na akparamaagwa na ụbụrụ mmadụ na akparamagwa anyị? Ọ gbagwojuru anya. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwado anyị site na ikiri ihe ngosi dị ịtụnanya, ị nwere ike ịdenye aha youtube.com/scishowpsych.
Nkeji 30 ọ̀ dị mkpụmkpụ maka mgbatị ahụ?
Ihe 'Nkeji 30Otu iwu 'sitere na nduzi gọọmentị US ugbu a, nke na-akwado ka ndị mmadụ tinye aka na 150Nkejiarụ ọrụ aerobic na-arụ ọrụ kwa izu. (Nke a na-arụ ọrụ banyereNkeji 30otu ụbọchị, ụbọchị ise n'izu.) Ma okwu bụ isi bụ 'imega ahụ́'.Ọnwa Ise 24, 2016
'Gbanyụọ ọkụ' ma gbanye egwu mgbe ị na-eri nri. Ihe ndọpụ uche ndị a na-ewepụ uche gị na nri. Mgbe ị na-eri nri, gbanye ụlọ gị ka ọ bụrụ nkịta, ka nnukwu anụ ọhịa bea gị ka ịchụso ka ị ghara inwe oge itinye nri ahụ n'ọnụ gị.
Kedu ụdị ndụmọdụ bụ nke ahụ? Maka ndị gị na-achọ inweta ahụ ike, enweghị ụkọ ndụmọdụ banyere ịdalata na ịntanetị - aga m ewere ụfọdụ ndụmọdụ ahụ wee nwalee ya site na polygraph. Ma chọpụta ihe bụ eziokwu, ihe na-abụghị na ihe dị n’etiti ala ahụ. Ka anyị kwuo nnukwu ekele maka Noom maka ịkwado edemede a.
Na-a coffeeụ kọfị ojii. 'Nke ahụ ga-eme ka metabolism gị na-aga.' Bio nso, caffeine yɛ biribi a ɛhaw adwene.
Ya mere, ọ nwere ike nwere ike mbo mbuli gị metabolism. Ma ihe mere okwu a ji amasị m n'ihi na kọfị ojii pụtara na enweghị calorie karịrị si shuga, mmiri ara ehi, akpa mmiri ara ehi. Ihe niile.
Na mgbakwunye, kọfị kọfị na-eme ka ijeụkwụ gị na-aga. Yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye na-ebu ọnụ na-ebu ọnụ oge niile, ị ga-enwetakwa ọtụtụ uru ndị ahụ na obere mmetụ na ụgbọ. 'Ikowe enyo n'ihu tebụl iri nri gị. 'Nnyocha na-egosi na ị na-ele onwe gị belata oke nri ị na-eri.' ‘Mba, oburu na ichoro ikpa oke n’iru tebụl iri nri n’ihi ịchọ mma, biko gaa n’ihu ozigbo.
Ọ bụrụ na ị na-eme ya iji mee ka ị kpọọ onwe gị asị mgbe ị na-eri nri, ee e. (Asụsụ mba ọzọ) Jiri obere efere na obere efere were rie nri nke gị. 'Nke a bụ aghụghọ a na - ahụ anya nke na - enye gị mmụọ zuru oke mgbe ị hụrụ efere dị ọcha. Ndụmọdụ a na-amasị m.
Echere m na ọ bụ mara mma adịghị njọ n'ọnụ. N'ezie otu nsogbu kachasị na omume iri nri nke ndị ọrịa m buru oke ibu ma ọ bụ nke buru ibu bụ na ha na-eri nri buru ibu ma ha amataghị ya. Yabụ inwe obere efere na-enyere onwe gị aka ịchọpụta oke ogo ọrụ.
Mgbe ị hụrụ ya ma rie efere niile, enwere echiche uche banyere otu ị si etinye ya, ọ na-emetụta ya. 'Soro na ibu ọnụ oge niile,' ọ bụ ezie na ọ nwekwara ike belata oke akwara. 'Nke a bụ esemokwu.
Maka ụfọdụ, dị ka m, ibu ọnụ oge niile na-arụ ọrụ dị ukwuu n'ihi na ị na-eri nri na windo oge, nke pụtara na ị gaghị eri 16 awa kwa ụbọchị ma naanị iri nri na usoro nri elekere asatọ ga-ebelata oge calorie ị na-eri. Ọ bụ naanị ọdịdị nke iri nri na windo pere mpe. Ndị mmadụ na-abanye na mmekọrịta mebiri emebi na omume iri nri ha mgbe ha mere ụdị ọsọ a.
Yabụ na ọ bụghị maka mmadụ niile, mana ọ bụ nhọrọ. Anyị ahụla ezigbo mmetụta ahụike dị mma ewezuga ọnwụ ọnwụ. Ndị a na-agụnye mgbanwe nke hormonal, mgbanwe mgbanwe ihu igwe dị mma, nghọta doro anya.
Enwekwara ezigbo uru na ịghara iri nri 16 ụbọchị. Nke a na - enye gị ohere mgbe ị nwere ike itinye uche gị, na - emega ahụ, ma eleghị anya ị ga - eme obere oge itinye uche. Gịnị Pụrụ Ime Ogologo Anya C? Ekwuru m aha Noom na mbu na ndị na-amaghị, Noom karịrị usoro mmefu ọnwụ.
Ọ na - agwakọta ike nke teknụzụ na ọmịiko nke ezigbo ndị nkuzi sayensị ga - enyere gị aka ịgbanwe omume gị. Ka mmekọrịta dị mma na nri nke na-eduga n'ibu ọnwụ. Ihe dị ukwuu banyere Noomis dabere na ihe ọmụma nke akparamaagwa na akparamàgwà omume iji nyere gị aka iwulite omume nke na-arapara ka ị wee nwee ike iru oke ahụ ike.
Enweghị usoro mmega ahụ dị mgbagwoju anya ma ọ bụ mgbochi nri, yana n'ihi na Noom na-elekwasị anya na omume na omume gị Ọ bụrụ na m na-ekwu okwu ọjọọ banyere nri na-eri nri, ọ bụ n'ihi na ọtụtụ mmadụ na-eme ya n'ụzọ adịghị mma mgbe ha dara ibu ma were otu Ibu a ọzọ. Na iwelata ibu, Noom na-enye gị ezigbo nghọta banyere ihe kpatara ị na-eji eme ụfọdụ ihe ị na-eme. Gịnị bụ ihe mkpali gị maka omume ụfọdụ? Cheta, ụdị ihe omuma a dị oke mkpa maka ndụ dị mma.
Enwere m egbu egbu nke 'Mara Onwe Gị' na ahụ m na Noom ga - enyere gị aka ịmata onwe gị. Jiri 'whey protein powder' dochie ihe oriri protein dị elu nke calorie gị. Enwere m ike ịkwado nke a nye ọtụtụ mmadụ.
Adịghị m nnukwu ofufe na-enweta protein m site na mgbakwunye nri. Mgbe ị nwere nri protein dị elu ọ na-abịakarị n'ụfọdụ abụba; ma eleghị anya, carbs ole na ole dabere na isi iyi protein. Ma ị nweta whey protein ntụ ntụ, ị na-anọrọ protein ahụ naanị ma ị ga-enweta ya.
Ọ dị m ka ị bara ọgaranya na-edozi ahụ You nwere ike ịchọta isi mmalite nke protein dịka tuna, dị ka salmọn. Na mgbakwunye na protein, ị na-enwetakwa ọtụtụ protein ndị ọzọ na-abụghị whey protein dị ka omega-3 fatty acids. 'Na-ata nwayọ nwayọ. 'Brainbụrụ gị nwere ike iwepụta oge iji gosi afọ gị'. na i juputara, ya mere, inwe ndidi na otu ụdị nri ị na-eri nwere ike ịhapụ oge mmiri b gị ka ewe belata tupu ị rie oke.
ekwentị mkpanaaka na gyroscope 2018
Aga m agbanwe ndụmọdụ ahụ ntakịrị. M ga-asị na-ata nlezianya n'ihi na ọ bụrụ na ị na-ata nwayọọ nwayọọ, ọ ga-abụ obere iru ala. Ma ọ bụrụ na ị kpachapụ anya họrọ, ị nwedịrị ike inye oge iji gosi ahụ gị na afọ juru gị, na ị na-enweta nri na-edozi ahụ ịchọrọ.
N’ihi na ọ bụ n’iri nri rijuo afọ, ọ bụghị n’uju afọ ju gị nke na ị kpọrọ onwe gị asị. Ka anyị chee ya ihu, anyị niile agaala ebe ahụ. Mana nke a abụghị ebe dị mma mgbe ị na-achọ ijide ibu dị mma. 'Mebie nri ị chọghị ma ọ bụ chọọ iri.
Ọ bụrụ na ị nwere nri fọdụrụ na-akpọ aha gị, chọta ụzọ ị ga-esi mebie nri, dịka ọmụmaatụ site na ịwụsa mmiri ara ehi na ya ma ọ bụ tinye tọn nnu. Kedu? Ọbụghị naanị na nke a na - ebute usoro iri nri na - adịghị mma ebe ị na - ebibi nri kama ịme mmekọrịta gị na ya, mana ị na - ewepụkwa nri mmadụ nwere ike iri. Ndị bi na America na-agụ agụụ, ọkachasị n’oge COVID-19.
Nke a bụ ezigbo nsogbu, ọ bụkwa nsogbu ka njọ n’ụwa niile. Amaghị m ebe ndụmọdụ a si, mana mkpịsị aka ukwu abụọ nye m. 'Na-a greenụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii. 'O juputara na antioxidants siri ike a na-akpọ catechins, bụ ndị a kwenyere na ha na-arụkọ ọrụ na caffeine iji meziwanye abụba ọkụ.
M otu n'ime ndị kasị ibu green tii Fans si n'ebe. Ọ dị mkpa ịmara na ọ nwere caffeine. Yabụ na ọ bụghị nnukwu mmanya ọ drinkụ atụ na njedebe nke ụbọchị.
Ma maka nri ehihie, maka nri ụtụtụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii bụ nnukwu nhọrọ. Ọ nwere ọ bụghị naanị catechins kamakwa polyphenols. L-theanine, nke ụdị caffeine na-akpali akpali maka mmụba ị nwetara, mana ọ na-enyekwa gị ọnọdụ ahụ dị jụụ n'uche gị.
Ọfọn, ma ọ bụ na-acha akwụkwọ ndụ tii na-eme ka ọnwụ dị arọ, ọ gaghị abụ mmetụta anwansị nke ị na-ahụ ebe a. N'ezie, ahụrụ m ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme ihe dị ka, 'Ihe mgbakwunye anyị nwere wepụ tii tii,' nke ahụ na-enyere gị aka ịba abụba. 'Agakwala ebe ahụ.' Oge ọzụzụ. 'Shortgba mgbatị dị mkpirikpi' nke ndị dị ogologo, ndị dị nwayọ na-esochi. 'Nke a bụ mmega ahụ m kachasị amasị m, HIIT, HIIT, HIIT, HIIT, nke a bụ nnukwu ọzụzụ ọzụzụ oge.
Na-eme ihe ọ bụla maka 30 sekọnd ma ọ bụ nkeji. Ma mgbe ahụ ị na-eme ezigbo ọkụ, ihe omume na-enwu enwu maka nkeji, nkeji atọ, nkeji ise. Nke mbụ, ọ na-akwalite ọnwụ.
Nke abuo, ọ na-akwalite ụlọ ahụ ike, na-eme ka mgbanwe obi dị iche iche dịkwuo mma. Ọ bụrụ na ịmalite imega ahụ ọsọ ọsọ ma were ike gị zuru oke, obi gị kwesịrị ịrị elu iji mee nke a. Ma ọ bụrụ na ị na-eme obere mmega ahụ, obi gị kwesiri inwe ike ị dajụọ, nke a ga - eji nwayọ nwayọ nwee ike ime ka obi gị daa jụụ n'oge oge ọkụ a.
Na ihe anyị hụgoro na nyocha sayensị mere ka ọ dịkwuo mma na ndị mmadụ nwere nkụchi obi mgbe ha nwere ezi mgbanwe mgbanwe obi. Ọ bụ ezigbo uru lanarị. Mee ka ọ mara gị ma kwere ka agụụ na-agụ gị. Gaghị enwe ike ifelata n’etachi agụụ. 'Ya mere, ọ dị mkpa ịmata mmetụta ahụ na ịhazi ya.' Nke ahụ abụghị eziokwu n'ezie emechara nke ọma.
Naanị ihe ị na-eri bụ na agụụ agaghị agụ gị. Ebe i na-enwe afọ ojuju ma ọ bụghị oke oke. N’ụzọ ahụ, ị ​​naghị eriju afọ kalori.
Nwe akwa nri ndị ahụ na-adịghị mma, mana ịgaghị anọdụ na agụụ. 'Welie ibu karịa ime kadị.' Ọ bụghị naanị na nke a na - eme ka ị ghara ibu abụba, mana ị na - ewulikwa ahụ ike iji nweta ya Dochie ya. '' Nye ndụmọdụ dị mfe mana echiche zuru oke.
M ga-akọwa. Mgbe m kwadoro ndị m na-emega ahụ ka ha na-emega ahụ, anaghị m ekwukarị naanị cardio ma ọ bụ naanị ike ọzụzụ. Ọ na-abụkarị njikọta nke abụọ.
Ihe kpatara nke a bụ na ha nwere uru dị iche iche na uru ndị ahụ na-ese onyinyo zuru oke nke ezigbo ma ọ bụ ezigbo ahụike; ọtụtụ ịga maka ịgba ọsọ, dịka ọmụmaatụ. N'ezie dị mma maka obi gị. Na-enyere aka na mgbanwe mgbanwe obi, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-eme ọzụzụ ọzụzụ dị oke elu.
Ma mgbe ị na-ebuli ibu, ọ bụghị naanị na ị na-ere abụba ma jiri calorie na-emega ahụ. Mgbe ị na-emega ahụ, ị ​​na-eme ya mgbe ị gbakere. Mgbe e mesịrị na ụbọchị ahụ, ụbọchị na-esote, n'ihi na ọ na-ewe ike iji wughachi akwara ndị ahụ ma wulite ha ike ma ọ bụ sie ike karị ma ọ bụrụ na i bulie ike zuru oke ma jiri nwayọọ nwayọọ gbochie metabolic slowdowns ebe metabolism gị na-akwụsị mgbe ọ nweghị ihe ị ga-eme ebe ahụ.
Mgbe ị na-eri nri, a na-amanye gị ịrụ ọrụ nke ọma. Nke a amachago nke ukwuu site na sayensị nke oge a na-enyocha nri caloric gị na ị gaghị eri nri ratụ ratụ, ịta nri, nri dị otu ahụ nwere ike ịbụ nhọrọ ga-ekwe omume. Mana ọ bụghị ụzọ gbara ọkpụrụkpụ iji nwee ihe ịga nke ọma.
Enwere ọtụtụ mmadụ nwere ike iri nri ugboro abụọ n’ụbọchị na ugboro atọ n’ụbọchị ma rụọkwa ọrụ dịka ndị na-eri obere nri ụbọchị niile. Nke a bụ mkpebi onwe onye dabere na ebumnuche gị, ndụ gị, na mmasị gị. Nke a ekwesịghị ịbụ usoro mgbu. Kingụ mmiri minit 30 tupu nri amalite na-enyere ahụ gị aka ịgba calorie ọkụ ngwa ngwa, wee si otú ahụ felata. ” Lostụfu ibu adịghị mfe dị ka ị drinkingụ mmiri, mana mmiri bara ezigbo uru maka ahụ gị, ọtụtụ uru ga-abakwara gị nke ọma.
Mmiri ọ willụ willụ ga-agbatị ahụ gị, yabụ na ị nwere ike ị gaghị eri ezigbo nri. Nke abuo, enwere mmiri thermogenesis usoro. Nke ahụ nwere ụfọdụ ihe akaebe na eziokwu na ị na-a degreeụ mmiri ogo 70 ị ga-eme ka okpomoku gị dị ọkụ ma nke ahụ na-ere calorie ụfọdụ.
Ọ bụghị nnukwu ihe, mana ọ kwesịrị ka akpọtụrụ ya. Ọ na - enyere aka wepu ihe mkpofu n’ahụ gị. Ọ na-ebelata gas ma nweta usoro niile.
Ọ na-emekwa gị hydrated na-arụ ọrụ nke ọma n'oge mmega ahụ gị. Mgbe ị nwere ezigbo mgbatị ahụ, ị ​​nwere ike ịmịkwu calorie ndị ọzọ. 'Malite ịkwadebe nri. 'Hazie nri gị niile maka izu ahụ' wee were awa ole na ole sie ha ma debe ha na arịa nwere ike ịbugharị tupu oge eruo 'Yabụ ị nwere ike iri nri kama ịnye ya iwu ka ọ laa' ọ bụrụ na ike gwụrụ gị isi nri ihe ohuru. 'Ahụrụ m ndụmọdụ ahụ n'anya.
Agbalịrị m n’oge gara aga, mana m ghọtara na abụ m osi nri dị egwu. N'ihi ya, m na-arụ ọrụ na ya. Mana ihe mere m ji anụ ụtọ nke a bụ maka A ị nwere ike ijikwa ụdị nri ị na-eri.
Kedu mmanụ ị ji esi nri? Mgbe inwere ikike a, ị ga-eme mkpebi kacha mma. Nke abuo, ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ma ị lọta ma ị nweghị ume ịme ihe, ị nwere ike ịtụ ahịa. Mgbe ị na-enye iwu, ị ga-asị, 'Ugbu a m na-enye iwu, achọrọ m ịnụ ụtọ ya.' Ga-enweta ihe na-adịghị mma.
diamondback onu ire
Yabụ ee, hazie nri gị tupu oge eruo. Will ga - echekwa ego, rie ezigbo ahụike ma nwekwaa ike ịmụ nkà ọhụrụ n’ihe ị ga - eme. 'Ọ bụ ezie na mmega ahụ nwere ike inyere gị aka ịkwụsị ibu, nri na-eme ka ọtụtụ akụkụ ibu nha.' Ọ ga-ekwe omume ịhapụ.
Achọrọ m ka ndị ọrịa m na-emega ahụ, ọ bụghị naanị n'ihi na amaara m na ha na-eji ike karị ma yabụ felata. Ọ bụ n'ihi na ọ dị mma n'akụkụ niile nke ndụ. Ọ ga - enyere aka belata ọnwụ, ọnọdụ gị, ụfụ gị.
Obi ike gị, nke nwere ikere oke na nchekasị gị ma ọ bụ mgbaàmà ịda mba. Otú ọ dị, ọ bụrụ na i nwere mmasị n’ezie ime ka ịdị arọ gị gbadata larịị ahụike, nke dị mma maka ogo gị na ụdị ndụ gị, nri bụ ihe kachasị mkpa ị ga-elekwasị anya. Nke a kwuru, ụra, mmega ahụ, ahụike uche gị.
E kwesịrị ịtụle ihe ndị a niile. Calorie na calorie oriri nwere ike inwe ezi uche site na echiche sayensị. i Site n’uche bara uru, ọ bụghị ezigbo mma, ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọ bụghị maka mmadụ niile.
Achọrọ m ịkọkọrịta ahụmahụ m na gị ka ị mara ihe ị ga-atụ anya mgbe ịpịrị ntule ntanetị n'ịntanetị na noom.com ma ọ bụ njikọ dị n'okpuru iji hazie mmemme dabere na ebumnuche gị. Maka m, ọ nwere mmasị ịhapụ obere ibu ma mebie ụfọdụ n'ime omume ọjọọ ndị a m zụlitere mgbe apụrụ iche.
Otu n'ime ahụmịhe m kachasị mma na Noom bụ obere mmeri ndị na-abụghị ọnụọgụ. Na nke ahụ bụ ihe m na mgbe mara na-atụ aro ka m ọrịa, ma ọ bụ ihe dị mfe na-ejidekwa ke ná ndụ kwa ụbọchị na-echefu banyere kwukwara uru nke a obi agbam ume, elu ike etoju. Ndị a na-atụnyekwa ụtụ na ndụ dị mma na nke obi ụtọ.
Enweghị m ike ịkọ otu akụkụ akụkụ kachasị mma nwere ọkachamara ọkachamara ezubere iche. Ezigbo onye ga - enyere gị aka ịnọ na egwu ma kwado gị mgbe ịchọrọ ha. M merụrụ m ụkwụ naanị izu gara aga ma chọọ enyemaka site na onye ọkachamara m na-atụ anya ka m gbanwee.
Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ha mere. Utu ke nditịmede esịt mban̄a unan oro n̄kesịnde, mma nsịn idem ke nduaidem nnyụn̄ ntiene nsịm mme utịtmbuba mi. Ruo ugbu a, ọ bụghị naanị na m zutere ihe mgbaru ọsọ m, mana ọ dị m ka m mere nhọrọ ndị ka mma n'oge ndụ m kwa ụbọchị.
Kpido Echere m na nke a bụ nnukwu mmeri. M na-atụ anya ịnọgide na njem a.
Pịa ebe a maka ndepụta ọkpụkpọ zuru ezu nke isiokwu m gbasara ezigbo nri. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịchị ọchị, lelee ọhụụ m na-eme. Ọzọkwa, nnukwu ekele Noom maka ịkwado isiokwu a.
Dị ka ọ na-adị, na-enwe obi ụtọ na ahụike. Kedu edemede nke ịpịrị?
Ọ dị mma ịme nkeji 10 HIIT kwa ụbọchị?
Ikwesighimee HIIT kwa ụbọchị. Ọtụtụ ndị ọrụ ahụ ike na-atụ aro ka ị chọọ ihe dịka 30Nkejinke mmega ahụ kwa ụbọchị iji debe ahụ gịgbasiri ike.
Enwere m ike ịkwụsị ibu ibu na-arụ ọrụ nkeji iri kwa ụbọchị?
BụNkeji 10 kwa ụbọchịezuru iji mee ka ị gbasie ike? Ozi ọma ahụ bụ na ee, ọ bụ!Nkeji 10nkemmega ahụkaụbọchị nwere ikeenyere gị akahapụ ibu ibu, yana ịnọ na calorie deficit ma nwee nnukwu ọdịiche na ahụike gị nammaetoju.Ọnwa Ise 11, 2020
Ekwesịrị m ịme mgbatị ahụ nke 7 kwa ụbọchị?
Ee, Jọdan kwuru, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị naghị arụ ọrụ ugbu a. 'Cheedị ịnọdụ alaNkeji 7vesosNkeji 7nke mmega. O doro anya na mmega ahụ bara uru. ' Mana ị ga-enweta nsonaazụ ka mma ma ọ bụrụ na ịmeghachi ya7-Nkejisekit.Ọnwa Ise 18, 2015
Mgbatị ahụ oge 7 ọ bụ n'efu?
Ihe mbụOge Nkeji 7bun'efu.Jenụwarị 13. 2021
Mgbatị ahụ dị oge 3 10 ọ dị irè?
Inweta dịkarịa alaNkeji 10nke na-aga n'ihu agafeghị oke ọrụatọugboro ugboro n'ụbọchị nwere ike inye otu uru ahụ ike dịka 30Nkejinke nkwụsịmmega ahụ.
Mgbatị ahụ dị nkeji iri na ise dị mma karịa ihe ọ bụla?
NaanịNkeji 15mmega ahụ kwa ụbọchị nwere ike ịkwalite atụmanya ndụ site na afọ atọ ma belata ọnwụ n'ihe dịka 14%, nchọpụta sitere na Taiwan na-atụ aro. Ndị ọkachamara na The Lancet kwuru na nke a bụ obere ọrụ onye toro eto nwere ike ime iji nweta ahụ ike ọ bụla.Ọgọst 16 2011